Nifarana ny tetikasa SIFPO2 : 680 000 ny tolotra nozaraina momba ny fandrindram-piterahana | NewsMada
Nifarana ny tetikasa SIFPO2 : 680 000 ny tolotra nozaraina momba ny fandrindram-piterahana
Nifarana ny tetikasa fanampiana ny orinasa misehatra amin’ny fandrindram-piterahana (SIFPO 2) nataon’ny Marie Stopes Madagascar (MSI) ary vatsian’ny USAID amin’ny vola nandritra ny fito taona. 109 ny distrika nahazo tolotra momba ny fandrindram-piterahana nandritra ny fotoam-piasana ary tanjona ho an’ny asa amin’ny ho avy ny handrakotra ny distrika 119, hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny MSI Madagascar, Razafinirinasoa Lalaina, omaly teny Andrainarivo. 680 000 teo ho eo ny tolotra naparitaka manerana ny faritra 22 ary anisan’ny nisongadina ny fahazoan’ny tanora misafidy ny fandrindram-piterahana mifanaraka amin’ny toe-batany. Nitombo (5%) ary lasa ho 16% ny isan’ny tanora latsaky ny 20 taona misafidy ny hisoroka ny vohoka tsy nirina na hametra ny zaza ho an’ireo efa niteraka koa teo anelanelan’ny taona 2010 sy 2016. Eto amintsika, amin’ny ankapobeny, efa manan-janaka iray avokoa ny tovovavy latsaky ny 18 taona.
Tranga iray niavaka koa ny fandavan’ny lehilahy any amin’ny faritra Androy hanao ny “vaséctomie” ka tsy hampiteraka azy intsony. Noho ny kolontsaina mbola manjaka any amin’io faritra io, tsy nahasarika ny lehilahy mihitsy ity fomba fandrindram-piterahana iray ity tao anatin’ny fito taona niasana any.
Mihantona ao amin’ny Antenimierandoholona ilay volavolan-dalàna
Mbola mipetraka ho olana amin’ny fanapariahana fanafody fandrindram-piterahana ny tsy fahazoan’ny mpanjifa fanafody amin’ny fotoana ilany izany noho ny lalana na sakana hafa. Misy koa ny lalàna malagasy tsy mamela ny tanora hisafidy malalaka ny fanafody hisorohana ny vohoka aloha loatra. Amin’izao fotoana izao, mbola eny anivon’ny Antenimierandoholona ilay volavolan-dalàna momba ny fahazoan’ny tanora mandrindra ny fiterahana. Efa nankatoa izany volavolan-dalàna izany kosa ny solombavambahoaka malagasy.
Na nitsahatra aza ny famatsian’ny USAID ny fanapariahana ny fandrindram-piterahana eo anivon’ny MSI, hitohy ny asa manerana ny Nosy miaraka amin’ny mpamatsy vola hafa. 45%-n’ny tetibola nentin’ny MSI niasa no nosahanin’ny USAID tamin’ny tetikasa SIFPO 2.